Nisokatra ny TEM Metris Bridge Interchange
Ny IMM dia nahatontosa ny fanamboarana ny làlambe misy ny tetezana sy ny làlana manamora izay hanamora ny fifamoivoizana Metris, izay iray amin'ireo teboka fototra ao Istanbul. Hiankina amin'ny Sultangazi sy Arnavutköy avy ao Edirne ny junction izay hosokanan'ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu. [More ...]
Nitondra mpandeha 6 tapitrisa 1 tapitrisa tao afan'ny alina Metro tao anatin'ny 210 volana
Nahatratra 2019 tapitrisa 6 ny mpandeha tao anaty 1 volana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny lalamby ambanin'ny tany, izay nanomboka ny volana aogositra 210 niaraka tamin'ny torolalana ny filoham-pirenena Imamoglu. Nilaza ny mponina ao Istanbul fa aleony ny metro handeha soa aman-tsara amin'ny alina. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
ExpZTAŞIT Fleet nitarina
Zava-boa telo hafa no nampidirina tamin'ny ZTAŞIT. Ny minibus dia hanompo ny mpiara-monina Orhanlı, Beyler sy Çamtepe. İZTAŞIT ny bus amin'ireny làlana ireny dia haodina ho any amin'ny làlan-dàlana lehibe. Ny minibus telo telo dia niaraka tamin'ny sambo 28-bus an'ny İZTAŞIT. vaovao [More ...]
Fomba voalohany fanondranana tram-boankazo ho an'i Bursa ao amin'ny sehatry ny rafitry ny lalamby
Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) Mpikambana Cluster mpikambana amin'ny Kianja Durmazlar Ny fanondranana entana voalohany tany Polonina, mpikambana avy ao amin'ny Vondrona Eropeana, dia nanamafy ny toeran'ny Bursa amin'ny teknolojia rafitra misy lalamby. Fitantanana BTSO [More ...]
Trondro Tunnel Grand Istanbul 3-roritra mba hoentina amin'ity taona ity
Trondro Tunnel Grand Istanbul 3-Store Tokony hotehirizina amin'ity taona ity; Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny fanombanana tamin'ny taona 2019 sy ny lasibatra 2020. Turhan, tamin'ny kabariny teto, [More ...]
Tolotra ao amin'ny Alanya Antalya Railola
Manatrika ny fivorian'ny DOSTLAR Platform ho mpandahateny fitenenana, Filohan'ny Fikambanan'ny Mpanome Toby Mediteraneana, TÜROFED ary Mpikambana ao amin'ny Birao fampiroboroboana ny fizahantany, Erkan Yağcı, Antalya, 900 miaraka amin'ny fitaovana 600. [More ...]
Fihetsika ohatra avy amin'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka tsy miankina Antalya
Ny mpivarotra fitateram-bahoaka İbrahim Bardak dia nitondra ilay kitapo, izay adino tao anaty fiara fitaterana ary nahitana vola moramora ho an'ny arivo tapitrisa, ho an'ny tompony. Mpisolovava efa misotro ronono Yunus Gülbaş any Antalya, mpivarotra fitateram-bahoaka publicbrahim Bardak [More ...]